Mahhala DFM Hlola - Shenzhen Wonderful Technology Co., Ltd
Njengoba kukho value-added amasevisi ethu OMhlangano, sinikeza Mahhala PCB Ifayela Hlola, eyaziwa nangokuthi Mahhala DFM, okungukuthi sisiza hlola wesifunda ibhodi ifayela lakho ngokwezifiso design nezindaba kungenzeka ukuthi kungase kuthinte manufacturability. Uma uhlangabezana nanoma yiziphi izinkinga zitholiwe, singathanda ithintane ngokushesha ukuxazulula udaba ndawonye, ​​bese ukuhlela ukukhiqizwa PCB ngokufanele.
I DFM oyokwenziwa kusuka 5 izici: Drill Ihlola, futhi sikhonze ngazozowke izikhati futhi ezixutshiwe Layer Ihlola, Amandla / Ground Ihlola, Solder imaski Ihlola, Silkscreen Ihlola. Funda ngokusebenzisa izigaba ezilandelayo ukuze uthole eminye imininingwane.
1. Drill Ihlola
I Drill Ihlola isinyathelo senzelwe ukuthola ezingaba manufacturability yokulimala sokuprakthiza izingqimba (ngokusebenzisa, wangcwatshwa futhi abayizimpumputhe nge izingqimba) kanye izibalo ku sokuprakthiza izingqimba. Kuhloswe ukuba isebenze kuphela sokuprakthiza izingqimba. Isebenzisa ungqimba sokuprakthiza, phezulu futhi izingqimba phansi sokuprakthiza yayo isitaki futhi noma yimaphi amandla noma phansi ungqimba kwisitaki. Uhlu lokuhlola main siboniswa Ithebula elilandelayo 1.
2. esiginali futhi ezixutshiwe Layer Ihlola
Lokhu umsebenzi senzelwe ukuthola ezingaba manufacturability yokulimala esiginali izingqimba futhi izingqimba okuxubile futhi izibalo. Isenzo ongasebenza kunoma iyiphi ungqimba, kodwa ikakhulukazi senzelwe isignali izingqimba. Isebenzisa ungqimba uqobo futhi iyiphi NC (sokuprakthiza noma umzila) ungqimba okuyinto lihlaba ke. Uhlu lokuhlola main siboniswa Ithebula elilandelayo 2.
3. Amandla / Ground Ihlola
I Ihlola Amandla / Ground enzelwe ukuthola ezingaba manufacturability yokulimala amandla, phansi futhi izingqimba okuxubile. Isebenzisa algorithm ezahlukene ukuxilonga amandla phansi engemihle futhi omuhle izingqimba. Uhlu lokuhlola main siboniswa Ithebula elilandelayo 3.
5. Ihlola Silkscreen
Lokhu umsebenzi senzelwe ukuthola ezingaba yokukhiqiza yokulimala silkscreen izingqimba futhi izibalo. Isheke sisebenza kuphela ku-kasilika izingqimba sikrini ngoba uncika matrix umsebenzi ukuthola ahlobene zethusi zangaphandle, solder imaski futhi sokuprakthiza izingqimba ngokumelene okuyinto ukuhlola. Uhlu lokuhlola main siboniswa Ithebula elilandelayo 5.
Wanna ukusizakala Mahhala DFM zethu kukho? Qala kusuka ukuthumela isicelo quote yezifiso yakho PCB LoMhlangano iphrojekthi wonderful@wonderfulpcb.com Qiniseka ukuthi zihlanganisa ifayela lakho PCB design, BOM nezinye izidingo eziqondene nayo. Ejenti ethu uzohlola ifayela uphe ikhotheshini ngokwezifiso zingakapheli izinsuku 1-2 ukusebenza.